तिम्रो आकाश जेठ २
Biju Subedi — Mon, 01/28/2019 - 21:45
तिम्रो हत्या भनेर आज कुनै पार्टीले स्वीकारेको छैन । तर तिम्रो दुर्घटना भएको स्थानमा पनि जाने मौका पाएँ । तर त्यहाँ सानो खोला थियो । कुनै ठक्कर खाने स्थान थिएन । कुनै अग्लो भू बनौट थिएन ।सम्म परेको भागमा गाडी पल्टिए पनि कसैलाई पनि केही होला र ? कि त तिमीलाई सुँघाएर मारेको हुनुपर्छ कि त तिमीलाई अन्तै मारेर ल्याएर डाइभरले खोलामा डुबाउन ल्याएको हुनुपर्छ । समाचार यस्तो छ कि भुसको थुप्रोमा ठक्कर लागेर तिम्रो दुर्घटना ! अहिले त डाइभरको पनि हत्या भइसकेको छ । यसलाई पनि दुर्घटना नै भनिनेछ पछि ।
HomSuvedi — Tue, 01/22/2019 - 08:13
म चाहन्न आस्था यहाँ डग्मगाओस्
कसैको दुराशा यहाँ सग्बगाओस्
म चाहन्छु सद्भावना जग्मगाओस्
र चाहन्छु यो देश नै मग्मगाओस् ।।
editor — Sat, 01/19/2019 - 02:13
हजुरको यादमा सबैरै सबेरै
सजल फर्फराए सबेरै सबेरै ।।
परेली भिजेछन् सबेरै सबेरै
जानु छ दूरदेश सबेरै सबेरै ।।
HomSuvedi — Tue, 01/15/2019 - 13:39
अब दसैंका लागि
टीकाको अक्षताका लागि
हरियो जङ्गलले भरिएको हाम्रो मुलुकमा
माघे सङ्क्रान्तिका कन्दमूल
मलेसियाको जङ्गलबाट मगाउनु पर्छ
HomSuvedi — Sun, 01/13/2019 - 11:37
पति सौदीमा एक अग्लो कसैको घर बनाउँदै छन्
मालिक नरिसा‌‌ओस् भनेर हार्दिक अभिवादन जनाउँदै छन्
परिवारबाट टाढा हुनुको पीडा उता उनलाई निकै छ
तर यता उनकी पत्नीसँग एक विदेशीले हनिमुन मनाउँदै छन् ।
पति विदेशमा पत्नी विदेशीको काखमा
HomSuvedi — Thu, 01/10/2019 - 08:33
पृथ्वीमा पहिलो जसै हुन पुग्यो मेरो कतै रोदन
त्यो बेला प्रभुले नयाँ नियममा गर्दै थिए शोधन
यद्वा ईश घरेलु काम निजको तत्कामल गर्दै थिए
मेरो लेख्न ललाटमा कति कुरा देवेशले बिर्सिए ।।
HomSuvedi — Sat, 01/05/2019 - 20:14
लाखौं लुटेरा अब लुट्न आए
ब्वाँसा हजारौं अझ सग्बगाए
बिच्छ्याउँदैछन् कि बुनेर जाल
यो देशको भो विकराल हाल ।।
सत्ता र भत्तातिर मात्र ध्यान
राख्नेहरूकै छ यहाँ बिहान
लुट्छन् सबै भ्रष्ट गनेर छाल
HomSuvedi — Mon, 12/31/2018 - 03:06
पढ्ने काम सकेर तृप्त नहुँदै बाँकी रहे तिर्सना
चौतारीतिर खोज्नु पर्छ कविका हज्जार छन् सिर्जना
मर्मश्पर्श गराई मित्रर मुटुको भित्रै कता हो छुने
लेख्तै पस्किनमा सिपालु मनका लाग्छन् त्यहाँ गोगने ।।
थोरै लेख्न सिपालु छन् अझ तिखो भावार्थ नै टिप्तछन्
मानौं शब्द र वस्तुमेल छिनुले मुर् त्याउँदै खिप्तछन् ।।
यस्ता कर्मठ काव्यसर्जक यहाँ खोज्ने कतै हो भने
पाल्नोस् सज्जनवृन्द काव्यपुरमा हुन्छन् त्यहाँ गोगने ।।
HomSuvedi — Sun, 12/02/2018 - 21:37
गोर्खाको दरबारबाट नजिकै देखिन्छ हाम्रो घर
कल्लेरीतिरबाट आउनु परे टाढा कहाँ पर्छ र
आऊ यो घरमा छ स्वागत सधैं आकाशका किन्नर
के तिम्रो अलकापुरी सरह झैं यो गाउँ देखिन्न र ?
HomSuvedi — Thu, 11/22/2018 - 09:19
माटोमाथिको विश्वासका पर्खालहरु चर्केका छन्
आफ्नै छोराहरु अर्काको घरतिर फर्केका छन् ।।
अन्धाधुन्ध विश्वग्रामको रहर बढेको छ बढेको छ
आफ्नो मातृभूमिबाट निरन्तर परपर तर्केका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल हेरेर अनुमान लगाउन सकिन्छ
अर्को मुलुकमा पुगेर धनको लोभमा भेडाबाख्रा जसरी खर्केका छन् ।
बडो हतार देखिएको छ आजको युगमा उन्नति गर्न
तेस्रो मुलुकमा गई उतै उन्नति गर्न भिसा पर्खेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा बडो मातृपितृभक्त पल्टेको देखिन्छ
यता आमाको सिटामोल खरिद गर्नु पर्दा नराम्रो गरी झर्केका छन् ।।
सुख शान्ति र समृद्धिको नारा कुर्लनेहरुको बिगबिगी छ
HomSuvedi — Mon, 11/19/2018 - 00:48
भूमिमा बढ्यो शीत हर्दम
आज देखियो सुस्त मौसम
सूर्यको दशा हुन्छ सुस्थिर
लौ फिरेछ यो मास मंसिर ।।